Iskaashigii mucaaradka oo hakad galey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iskaashigii mucaaradka oo hakad galey
La daabacay onsdag 27 oktober 2010 kl 10.18
Iskaashigii xisbiyada mucaaradka oo la hakiyey.
Iskaashigii siyaasadeed ee labadii sanoo u danbeeysey ka dhexeeyey xisbiyada mucaaradka ee casaan/cagaarka ayaa imminka la hakiyey,sida ay sheegtey hogaamiyaha xisbiga Socialdemoqoraati-ga Mona Sahlin.
Mona Sahlin ayaa warfaafinta u sheegtey in iskaashigii ay horey u lahaayeen xisbiyada Sooshaldemoqoraati-ga, xisbiga cagaaran ee Miljöparti-ga iyo xisbiga bidixda ee Vänsterparti-ga uu yeelan doono qaab kale oo ka duwan sidii hore .
Bishii december ee sanadkii 2008-da ayey aheeyd markii xisbiyada Sooshaldemoqoraati-ga ,xisbiga cagaaran ee Miljöparti-ga iyo xisbiga bidixda ee Vänsterparti-gu ay sheegeen in wadashaqeeyni dhexmari doonto ujeedada laga leeyahay ay tahay in dhisaan dawlad ay u dhan yihiin.
Xataa ka dib markii xisbiyada casaan /cagaarka looga guuleeystey doorashadii dalkaan ka dhacdey bishii september ee sanadkaan 2010-ka ,ayey xisbiyadaani si wadajir ah usbuucii hore u soo bandhigeen miisaaniyad ay ku mideeysan yihiin,laakiin sidaas oo ay tahay iskaashiga xisbiyadaan ayaa hadda yeelanaya qaab ka duwan iskaashigoodii hore,ilaa iyo hadana ma cadda in ay dib u soo nooleeyn doonaan xiriirkoodii iskaashi ka hor inta aan la gaarin doorashada dalkaan ka dhici doonta sanadka 2014-ka.